ProPrompter: Fifandraisana amin'ny maso amin'ny Webcam | Martech Zone
Alakamisy, May 2, 2013 Sabotsy, Desambra 5, 2015 Douglas Karr
Zava-dehibe ny fanaovana fifandraisana amin'ny maso rehefa mampiasa ny fakantsarinao. Guy Kawasaki dia nizara ny fomba nataony mametraka ny fakantsariny amin'ny Internet amin'ny tripod eo alohan'ny monitor hany ka resaka mahafinaritra kokoa no resahina rehefa miresaka amin'ny olona any amin'ny toeram-pitsaboana izy. Scott Atwood an'ny Google nibitsibitsika ary nanondro fitaovana kely mahatalanjona hanamorana ny zavatra.
ProPrompter Desktop dia fitaovana toy ny periskope izay azonao apetraka amin'ny solosainao finday na ny monitor desktop izay mamily ny fahitan'ny fakantsaranao avy eo an-tampon'ny efijery ka hatrany amin'ny toerana tadiavinao. Na mihazakazaka fampiharana teleprompter ianao na miresaka amin'ny horonan-tsary dia apetraho ao anaty faritry ny faran'ny fitaovana fotsiny ny varavarankely.
Azonao atao izao ny manoratra horonantsary na mitazona fotoam-pivoriana izay ifandraisan'ny masonao amin'ny mpihaino anao!
Tags: bodelinmaso mifanatrikaproprompterseeeye2eyeseeeyetwoeyeteleprompterwebcam
May 3, 2013 amin'ny 10: 57 AM
“SeeEye2Eye … mamindra ny fahitan'ny fakantsarinao avy eny an-tampon'ny efijery mankany amin'izay tadiavinao.”
Raha ny marina, toa mitaratra ny sarin'ilay olona iresahanao amin'ny vidéo izy io ary mampiseho ny fitaratra eo anoloan'ny fakantsarinao manokana. Ka rehefa mijery ny sary misy fitaratra ianao, dia mifantoka kokoa amin'ny cam-nao ny masonao. Raha tsy hoe diso fahazoako zavatra. 🙂
May 3, 2013 amin'ny 11: 00 AM
Mety marina ny anao @markfrisk:disqus ! Manantena ny hahazo iray aho ary manandrana azy !!!
May 14, 2017 ao amin'ny 3: 23 PM
Douglas, ianao ve?
May 17, 2017 ao amin'ny 10: 58 PM
Raha ny marina, tsia. Tena tsy tiako ny manoratra ny resadresaka ataoko amin'ny Internet na amin'ny podcast na video. Tsy "mahatsapa" voajanahary amiko izany.
May 6, 2013 ao amin'ny 3: 38 PM
Ny orinasako dia manao vidéo mpitondra tenin'ny (http://www.liveonpage.com). Nandritra ny 6 taona nanaovanay an'io, izahay no hany orinasa miteny amin'ny mpanjifa hampiasa fampisehoana tapa-body. Ny fifampikasihan-maso natao no antony. Hitanay fa ny tahan'ny fiovam-po, ny ora fiambenana ary ny taham-pamokarana dia samy maneho fa ny fifanandrinana amin'ny maso no mahatonga ny fiovana. Ny vatana manontolo dia gimmick amin'ny ankapobeny. Ny hany fotoana ahitantsika fitifirana loha ka hatramin'ny tongotra dia rehefa misy olona eo ampitan'ny efitrano, ary noho izany dia tsy miraharaha azy ireo izahay.